China laminated Glass fanamboarana sy ny orinasa | Glass fitaratra fifaliana
Fiarovana tena avo lenta: ny mpifanerasera PVB dia mahatohitra ny fidiran'ny vokany. Na vaky aza ny vera dia hifikitra amin'ny interlayer ny maratra fa tsy hiparitaka. Raha ampitahaina amin'ny karazana fitaratra hafa, ny vera voahodina dia manana tanjaka lehibe kokoa hanoherana ny hatairana, ny vaky trano, ny fipoahana ary ny bala.
1. fiarovana avo lenta:Ny interlayer PVB dia mahatanty ny fidirana amin'ny fiantraikany. Na vaky aza ny vera dia hifikitra amin'ny interlayer ny maratra fa tsy hiparitaka. Raha ampitahaina amin'ny karazana fitaratra hafa, ny vera voahodina dia manana tanjaka lehibe kokoa hanoherana ny hatairana, ny vaky trano, ny fipoahana ary ny bala.
2. Fitaovana fananganana energie: Ny interlayer PVB dia manakana ny fifindran'ny hafanan'ny masoandro ary mampihena ny enta-mavesatra,
3. Mamorona fahatsapana hatsarana ho an'ny trano: Ny vera voarary miaraka amina interlayer miloko dia handanjalanja ireo trano ary hampifanaraka ny fisehoany amin'ny fomba fijery manodidina izay mahafaly ny fangatahan'ny mpanao maritrano.
4. fanaraha-maso feo: Mpandray anjara PVB dia mpandray feo mandaitra.
Fizarana 5.Ultraviolet: Ny interlayer dia manala ny taratra ultraviolet ary manakana ny fanaka sy ny lambam-baravarana mihena vokany
Loko PVB: Mazava, Maitso, manga, varahina, volondavenona, fotsy ronono sns.
Loko fitaratra: Mazava, Mazava hafa, Maitso frantsay, Maitso mainty, Ford Blue, Manga manga, alimo, Euro volomparasy sns misy amin'ny vera hita taratra ihany koa.
Hateviny: 3 + 0.38 + 3mm, 4 + 0.38 + 4mm, 5 + 0.38 + 5mm, 6 + 0.38 + 6mm, 3 + 0.76 + 3mm, 4 + 0.76 + 4mm, 5 + 0.76 + 5mm, 6 + 0.76 + 6mm sns , azo namokatra araka ny fangatahana.
Habe: 1830x2440mm, 2134x3300mm, 2440x3660 sns azo novokarina arak'izay takinao.
1. Fiarovana avo lenta: ny mpifanerasera PVB dia mahatohitra ny fidiran'ny vokany. Na vaky aza ny vera dia hifikitra amin'ny interlayer ny maratra fa tsy hiparitaka. Raha ampitahaina amin'ny karazana fitaratra hafa, ny vera voahodina dia manana tanjaka lehibe kokoa hanoherana ny hatairana, ny vaky trano, ny fipoahana ary ny bala.
2. Fitaovana fananganana angovo: ny interlayer PVB dia manakana ny fandefasana ny hafanan'ny masoandro ary mampihena ny enta-mavesatra.
3. Mamorona fahatsapana hatsarana ho an'ny tranobe: ny vera voarary miaraka amina interlayer miloko dia handravaka ireo trano ary hampifanaraka ny endrik'izy ireo amin'ny fomba fijery manodidina izay mahafaly ny fangatahan'ny mpanao maritrano.
4. Fanaraha-maso ny feo: mpandray feo miavaka PVB dia mpandray feo mandaitra.
-Windows sy varavarana amin'ny maritrano
-Ny rindrina sy rindrina ambainy
-Railings / fefy / baluster / bala any an-trano, toeram-pivarotana lehibe.
-Lavo sy tohatra
-Fivarotana na zana-kafatra
-Ny fantsom-panafody dobo
-Ny toerana rehetra misy fiarovana ambony
Teo aloha: Voaravaka vera
Manaraka: Glass vera
Glass fitaratra voadio
Clear vera voalamina
Fanapahana vera voalamina
Glass vera voalamina
Voasarimakirana fitaratra vita amin'ny vera
Varavarana vera voalamina
Panamaso vita amin'ny vera
Windows Windows misy vera
Glass fitahirizana voahosotra
Fitaratra milina fotsy